यदि व्यक्तिगत जीवनले थप्न सक्दैन भने, त्यसपछि एक दम्पतीको आवाजले आफूलाई तुरुन्तै पत्ता लगाउने आवाजको आवाजले आवाज पुर्याउनेछ। तर केही कारणको लागि कुनै पनि सल्लाहकारहरूले राम्रो मान्छेसँग परिचित हुन कहाँ बताउँछन्। जस्तै यो धेरै सरल छ! डेटिङ साइटहरू एक रातको लागि बैठकका प्रेमीहरूमा आउँदैछन्, कैफेहरू र बारहरू स्थितिमा उस्तै छ, एउटै शहरमा एक चिन्हमा जानु हुँदैन "तुरुन्त एक मानिस चाहिन्छ, सबैलाई कल गर्नुहोस्।" तर सबभन्दा राम्रो छैन, गम्भीर परिचितिका लागि ठाउँहरू छन्, केवल धैर्य र थोपा भाग्य चाहिन्छ।
म कहाँ गम्भीर व्यक्ति संग परिचित हुन सक्छु?
तपाईं सज्जन को खोज मा जाने देखि पहिले, तपाईं आफैले उनको अनुमानित चित्र को निर्धारण गर्नु पर्छ। उदाहरणका लागि, प्रायः खेलकुद बारहरूमा जाने गर्दछन्, किनकि प्रायः पुरुषहरूको वृद्धि घनत्व हो। तर त्यहाँ त्यहाँ जानुहोस् यदि तपाइँ एकजना मानिसको पछि हेर्नको लागी तयार हुनुहुन्छ जुन खेलकुद धेरै उत्सुक हुन्छ। यदि तपाईं प्रशंसकहरूको यी सबै भीड मनपर्दैन भने, र तपाइँले सधै अपमानजनक रूपमा खेलकूद घटनाको प्रसारणलाई मारेर च्यानललाई स्विच गर्नुहुन्छ, त्यसपछि यो राम्रो छ यो दिशामा खोजीहरू सञ्चालन गर्न। त्यसोभए एक राम्रो मान्छे संग परिचित हो?
काम कार्यालय रोमांस, निस्सन्देह, उत्तम विकल्प होइन, तर कसैले तपाईंलाई सहकर्मीहरू हेर्नको लागि बल दिन्छ। निश्चित रूपमा त्यहाँका नजिकका कार्यालयहरू छन्, जसमा तपाईंको भाग्य अवस्थित हुन सक्छ। यसको अतिरिक्त, यदि तपाईं एक धनी मान्छे संग परिचित हुनुमा सोच्नुहुन्छ, त्यसपछि अफिस एक महान स्थान हो। यहाँ तपाई तुरुन्तै आफ्नो सामाजिक स्थिति खाली हुनुभयो, र सहकर्मीहरूले उहाँबारे बढी जान्न सक्छन्।
आत्म-शिक्षाको पाठ्यक्रम । यो एकदम महत्त्वपूर्ण छैन कि यो हुनेछ: रुचि विषय, विदेशी भाषा पाठ्यक्रम वा प्रशिक्षणमा पुरानो प्रोफेसर द्वारा व्याख्यान, तपाइँ सबै ठाँउहरू नयाँ परिचित पाउन सक्नुहुनेछ। केटीसँग कुराकानी गर्न इन्कार नगर्नुहोस्, अचानक उनीसँग अचम्मको भाइ वा बचपनको स्नातक छ?
पसल । ल्हासा रोचक पुरुषहरू किन किनमेलमा जान्छन्, केवल वरपर हेर्न सिक्न। तपाईं सजिलै सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, एक रोचक विकल्प पुस्तक स्टोर हुनेछ। यहाँ तपाईं एक व्यक्ति को स्वाद को मूल्यांकन र एक साँच्चै रोचक व्यक्ति संग एक कुराकानी शुरू गर्ने मौका छ जसले आफ्नो क्षितिज लाई विस्तृत गर्न को लागी प्रयास गरिरहेको छ। यद्यपि घरमा अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हुनुपर्दछ, म प्रायः मस्तिष्कको उल्टाउन दिनका पुस्तकहरू पढ्न सक्दिनँ।
Excursion । यदि तपाईं कथामा पनि सानो चासो हुनुहुन्छ भने, यो यो विकल्पमा ध्यान दिन लायक छ। धेरै पुरुषहरु अतीत को घटनाहरु को बारे मा जानकारी मा आकर्षित हुन्छन्, खासकर यदि यो युद्ध को उल्लेख गर्दछ। तपाईंले एक चोटि चयन गर्दा यो सम्झनुहोस्।
फिटनेस क्लब । यदि तपाईं एक पेट संग विचारशील मान्छे को थकित हुनुहुन्छ भने, ईमानदारी देखि आफैलाई एक महिला को एक अवांछनीय सपना को कल्पना, त्यसपछि एक फिटनेस क्लब मा जान्छन्। निस्सन्देह, त्यहाँ सबै Apollos पनि छैनन्, तर यी मानिसहरू कम से कम चिप्स को एक प्याप संग बस्न नदिन, रोजगार को बारे मा शिकायत। यो विकल्प उपयुक्त हुन्छ यदि तपाईं जान्दछन् कि एक अमीर मानिस संग परिचित हुनु कहाँ छ। यदि तपाईंले एक सदस्यता खरिद गर्न पैसा पाउनुभयो, त्यसपछि सबै चीज खराब छैन।
चासोको क्लब । धेरैजना पुरुषहरू शौचालय छन् जसले कामबाट ब्रेक दिन्छ। त्यसकारण, एक व्यक्तिको शौक छान्नुहोस्, जुन तपाइँलाई रोचक छ, र नयाँ परिचितहरूको खोजीमा जानुहोस्।
प्रदर्शनी । जब तपाइँ सफल व्यक्तिलाई कहाँ भेट्न सोध्नुभयो भने, तिनीहरू प्राय: एक प्रस्तुतीकरण, एक प्रदर्शनी, एक थिएटर प्रेमी वा संगीत संगीत कार्यक्रममा जाने सिफारिसको साथ जवाफ दिन्छ।
इन्टरनेट । यो डेटिङ साइटहरूको बारेमा छैन, यद्यपि त्यहाँ तपाई आफैले मानिसलाई पत्ता लगाउन प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को कुरा भनेको सामान्यतया यस्ता खोजीहरू धेरै समय लाग्छन्, त्यस्ता स्रोतहरू छन् जुन ध्यानको योग्य छैनन् धेरै उम्मेदवारहरू छन्। त्यसैले त तिनीहरूका लागि साइटहरूमा जान राम्रो हुन्छ। उदाहरणका लागि, यदि तपाइँसँग एउटा कार छ भने उपयुक्त पृष्ठमा जानुहोस्, त्यहाँ कुराकानी सुरू गर्न सजिलो छ, भर्खरै सल्लाहको लागि सोध्नुहोस् वा यदि तपाइँ बुझ्नुहुन्छ भने तपाइँको राय व्यक्त गर्नुहोस्।
र अन्तमा, जहाँ पनि तपाईं एक सभ्य मानिससँग परिचित हुनुहुन्छ भन्ने निर्णय गर्नुहुन्छ, यो इच्छा पहिलो स्थानमा राख्नुहोस्। पाठ्यक्रमहरूमा जानुहोस्, विषयमा रूचि राख्नुहोस्। पुरुषहरू तुरुन्त एक धोखाधडीलाई चिन्न, जो केवल एक जोडा खोज्न इच्छुक हुन्छन्। र मानवताको बलियो आधाको यस्ता "शिकारी" प्रतिनिधिहरू धेरै नमनपरासी र डराउँछन्।
केटालाई कसरी इन्कार गर्ने?
किन र हामी मानिसहरू पिउने छौ?
एक विवाहित मान्छे संग सम्बन्ध - एक मनोवैज्ञानिक को सल्लाह
लेन्ससँग जीन्स - के गर्ने र कसरी फैशनेबल छवियों सिर्जना गर्ने?
Forehead क्षेत्रमा हेडचेस
कपालले ओवनमा पकायो
घरमा सजावटी खरगोश, कसरी ठीकसँग राख्ने र हेरविचार गर्ने?
मेगन मार्कले आफ्नो मनपर्ने ब्रान्ड रिटम्यान्ससँग सहयोगको सम्झौतालाई समाप्त गर्यो
"स्टार वार्स" र एक तारा बिल्ट इन्टरनेट पेस गर्दैछ
कागजको चश्मे कसरी बनाउने?
बच्चाले आफ्नो आँखा रोल्यो
एक आस्तीन संग कोट तीन चौथाई
फैशनेबल घडी 2016
भ्रूण स्थानान्तरण पछि कसरी व्यवहार गर्ने?
एक दिन कसरी वजन गुमाउने?
भान्साको ठोस काठको भान्साको लागि
अष्ट्रेलियाको राष्ट्रिय ग्यालरी
ट्रिन्ट - प्रयोगको लागि संकेत
क्यानेडियन स्फिन्क्स - हेरविचार र सामग्री